सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा एनआईसी एशिया बैंक, सर्वाधिक नाफा बृद्धि गर्नेमा सिभिल बैंक - कुन बैंकको नाफा कति? - Business Awaj
Home Banking सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा एनआईसी एशिया बैंक, सर्वाधिक नाफा बृद्धि गर्नेमा सिभिल बैंक...
सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा एनआईसी एशिया बैंक, सर्वाधिक नाफा बृद्धि गर्नेमा सिभिल बैंक – कुन बैंकको नाफा कति?
वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरि सकेको छ । प्रकाशित वित्तीय वितरण अनुसार २३ बैंकको खुद नाफा बृद्धि हुँदा ४ बैंकको खुद नाफा घटेको छ । यस अवधिमा ५ बैंकले १ अर्ब माथि खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सर्वाधिक नाफा एनआईसी एशिया बैंकले कमाउन सफल भएको छ । पहिलो त्रैमासमा यस बैंकले १ अर्ब १८ करोड खुद नाफा कमाएको छ ।
त्यसैगरी दोश्रोमा रहेको छ नबिल बैंक, १ अर्ब ११ करोड खुद नाफा रहेको छ भने तेश्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंक जसको १ अर्ब ११ करोड खुद नाफा रहेको छ ।
सबैभन्दा कम खुद नाफा कमाउनेमा बैंक अफ काठमाडौं रहेको छ । बैंकले यस अवधिमा २५ करोड ३५ लाख कमाएको छ ।
त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सर्वाधिक खुद नाफा बढाउनेमा सिभिल बैंक रहेको छ । सिभिल बैंकको खुद नाफा २०१.८८ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा बैंकको खुद नाफा ९ करोड ६७ लाखबाट बढेर २९ करोड १८ लाख पुगेको हो ।
त्यसैगरी दोश्रो स्थानमा सिद्धार्थ बैंक रहेको छ । सिद्धार्थ बैंकको नाफा ८९.५० प्रतिशतले बढेर ९४ करोड ८७ लाख पुगेको छ । तेश्रो स्थानमा नेपाल एसबिआई बैंक रहेको छ । बैंकको खुद नाफा ८५.९९ प्रतिशतले बढेकोहो ।
चार बैंकको भने खुद नाफा घटेको छ । प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको खुद नाफा घटेको हो । नेपाल बंगलादेश बैंकको खुद नाफा २७.९३ प्रतिशतले घटेको छ भने प्रभु बैंकको खुद नाफा २५.१४ प्रतिशतल घटेको छ ।
Previous articleज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले गर्यो बोनस तथा नगद लाभांश घोषणा
Next articleसामलिङ्ग पावरको आइपीओ बाँडफाँड सम्पन्न – २१ लाख बढी आबेदक भए हात खाली
नबिल बैंकको १० वटा शाखा बन्द
बिओकेका ग्राहकलाई मेडिप्लस अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट
बैंकर्स हस्पिटल खोल्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमा
उपत्यकामा शुक्रबार देखि जोर बिजोर लागू
चपेटामा नेपाली अटो बजार
स्याङ्जामा ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन